PEUGEOT (308) , 2015 ,TNI – Super Seven Stars
PEUGEOT (308) , 2015 ,TNI
Buy For 29 500$
Warranty Expiry Date 25 . Augest . 2019
PEUGEOT (308) ကားသည် Engine power 1.6 L / Gasoline /6Speed Auto Transmission ဖြစ်ပြီး Luxury Grade ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…….
Pre Owned Cars ကားများအား ဝယ်ယူလိုပါက လက်ငင်းငွေချေစနစ် (သို့မဟုတ်) ( ၁ ) နှစ် မှ ( ၃ )နှစ် အထိ အရစ်ကျစနစ် ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀% ပေးချေပြီး ကားအား ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်….
Peugeot 308 သည် Small Family ကားဖြစ်ပြီး Hatchback အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် မောင်းနှင်ရာတွင်သွက်လက်ပေါ့ပါးလျှင်မြန်စေပါသည်။
Peugeot 308 ၏ ပြောင်လက်တောက်ပသော Leather အတွင်းခန်းဒီဇိုင်း ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ခေတ်မှီလှပပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် မြင်ကွင်းကျယ် Super Vision Cluster ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
9.7 inch Multi – Function Touchscreen ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် များစွာသော Shortcuts များကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် လွယ်ကူလျှင်မြန်စေပါသည်။
Air Conditioning မှာ အအေးကြိုက်နှစ်သက်သူနှင့် အအေးမနှစ်ခြိုက်သူများပါအတူတကွအသုံးပြုနိုင်မည့် Dual Ventilation System Touch Screen ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေပါသည်။
ဂီယာလက်တံမှာ Leather ဖုံးအုပ်ထားသောဒီဇိုင်းဖြင့်သေသပ်လှပပြီ6းspeed auto transmission ဖြစ်ပါသည်။
Electric Parking Brake စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် Manual လက်ဖြင့်ပြုလုပ်စရာမလိုပဲ ခလုပ်ဆွဲရုံ ချရုံဖြင့် parking brake ဖြစ်ပြီး ကားပြန်ထွက်လျှင် ဂီယာD ထိုးပြီး လီဗာနင်းရုံဖြင့် Auto Parking brake ဖြုတ်ပေးသောစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါသည်။
Rear View Camera ပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ကားနောက်ဆုတ်ခြင်းနှင့် ကားပါကင်ထိုးရာတွင်လဲ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါသည်။
Peugeot 308 ၏ Hand Door Design မှာလဲ ခိုင်ခံ့မာကျောသော Stainless Steel အစစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်မှုများမှလဲ အပြည့်အ၀ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် air bags (6) လုံးပါဝင်ပါသည်။
ဖုန်းထဲတွင်ရှိသော သီချင်းများကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်၍ နားဆင်နိုင်စေရန် USB ပေါက်ပါပြီး ဖုန်း Battery ကိုလဲ အလွယ်တကူ သွင်းနိုင်ပါသည်။
လိုက်ပါစီးနှင်းသူများ ထဲမှအရေးပေါ်ခါးပတ် မပတ်ထားပါက အချက်ပြမီးလင်းပေးသော စနစ်လဲပါဝင်ပါသည်။
ခရီးဝေးသွားသော်လည်းကောင်း ၊ကလေးသူငယ်များကို ကျောင်းအပို့ အကြိုသော်လည်းကောင်း အစားအသောက် အအေးဗူးများထည့်ရာတွင်အအေးထိန်းစေမည့် Glove Box Cooling System ပါရှိပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝအလှအပ ရသပေါင်းစုံကို Moon Roof မှတဆင့် အပြည့်အ၀ ခံစားနိုင်မည့်အပြင် Moon Roof ၏အောက်တွင်လည်း Sunshade ပါဝင်ပါသည်။
Rain Sensor ပါဝင်ပါသဖြင့် Windshield Wipers မှာ မိုးရွာသောအချိန်တွင်ကျလာသော မိုးရေစက်အနည်းအများပေါ် မှုတည်၍ Wiper လက်တံ အနှေးအမြန် အလိုလျောက် ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် Wiper ခလုတ်ဖွင့်စရာမလိုတော့ဘဲ အလုပ်ရှုပ်မှုမှ သက်သာစေပြီး ကားမောင်းရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ရှေ့ကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့်မြင်နိုင်ပါတယ်။
Engine Power မှာ 1600 CC / Gasoline /6Speed Auto Transmission ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။